Kuzhaka sugar Momz yandakasangana nayo pa Whatsapp Group – Vanoda Zvinhu
· Updated June 30, 2015
Imiwoye zvakawoma mirai ndikuwudzeyi kubva pakutanga chaipo.
So ndajoina group repa watsapp randanga ndawana pafacebook. Ini ndirimunhu wemajokes handipererwe nenyaya. Nekufamba kwenguva nda ndakuitanawo sweetie swetie babie babie neimwe moms yepagroup apa. Kutozowona ahh takutawura tese kuinbox chaiko. Right ini ndiri kuno hangu kumzansi mukadzi uyu anogara kuborrodale atori nemari dzake Ko ka taitawurirana kuti tizivane. Akadzidza chaizvo saka anebasa rakanakisa. Ane vana vake 3 vadiki apa akasiyana nemurume.
Mukutawurira kuye pawatsapp ndakaziva kuti muhombe ne 2 yrs but hazvina kana basa chinodiwa kunakirana chete. Nawo matext pawatsapp.manheru ega ega zvekuti taisvika kana kuma 2 monaz tichiita chat. Achisender mapictures ake ini ndichisendawo angu taiitira pakuzivana apa. One day wanike asender picture yake but iri yebeche ini ahh hoo.
Ndakabva ndatanga kumuwudza zvandaida kuzoriita beche iroro pandinomuwona wanike munhu akutoti ahh iwe zvawurikutawura izvozvo hana manje ndatotota. Ini ndikati kana uchitota paphone saka ndikangokubata unototundazve. Takaita zvimazuva tichiita izvi iye achindiwudzawo kuti anoda kundiyamwa mboro hanzi inonzi phone sex imi woye technology idzi. Any misi wechitatu ndakanzwa phone yapinda kubva Zimbabwe wanike ndiamai vaye hanzi ndirikukwira bhazi thursday kuyenda kumessina kushopping if you are free come see me on friday ndasvika. Ndikangoti hangu nechomumoyo kuivinga mboro yangu ka uku. Ndikamuti hangu no problem ndichatora off kubasa mai vakafara ivavo. Kubasa off woye zvikanzi wakanonoka kutawura saka hazviite apa moms iya yatokwira bhaz apo pagroup yatosasa kuti ndirikuyenda joni kunowona daddy. Ko pagroup tanga titori one of the best couples.
Guys ndigaye kuti ndikasayenda kunowona moms iyi yaizosasa pagroup kuti kwaani muface akakwata kuwuya kuzondiwona iniwo ndiri gentlemen i have never stood a lady. Ndapedza basa kuma 5 speed kuparkstation kunobata kombi inoyenda messina wanike kombi iripo asi kuzara kwaramba. Tazosimuka kuma 8 manheru apa kuyenda messina kubva joburg its about 7 to 8 hrs. Ndikati ndotokuyenda chete rawuya haro remahara handiriseye. Moms irikusender msg are coming ? Ndikati yes on my way. Wanike kwapinda imwe msg hanzi ndabooker mulodge inonzi Limpopo river lodge mu room next nepa shell garage uchangopinda mumessina mu room 23.
Kuma 4am pfacha ndichisvika paye apa ndemuna june kinze kurikutonhora zvakaipa. Kusvika pareception kuvawudza kuti there is a laddy in room 23 she is expecting me. Apa receptionist wacho ayive mukadzi kkk guys ndakamboda kunyara. Receptionist ndobva afona kuye ndobva andipa madirections ekuroom 23. Pfacha. Ndanoka moms iya yavhura door apa light rakadzimwa semunhu anga arara kare. Ini batidze light kuti ndimuwone. Wanike ndewuno mukadzi mutsvuku tsvuku munaku Ehhka unofanira kuti utarise chikafu chaurikudya kumwe kunakirwa kunowedzerwa nezvawawona. Moms yanga yakapfeka bra ne pant chete kungokand ziso pamazamu mahombe iyayo matsvuku sajeni havana kutana kumira attention. Kune varume vanozvitemba pakusvira sene zvombo zvedu tine mazita atinozvipa. Yangu inonzi Sajeni Putunanzi. Handina kutoranguva kubvisa hembe dzese akatarisa hake.
Ndakapinda mugumbeze ndakananga straight pamuro. Deep kiss chaiyo ko tanga tane medzi tichidanana tanga tisati tawonana chete. Rimwe ruwoko pazamu riri mubra kudaro ndichiripuruzira. Mukadzi anokisa hake iyeye ndobva adzikisa ega bra kubuditsa mazamu aya panze ndakadzika ndichikisa huro nemashoulders kusvika ndasvika pazamu. Ndakamatarisa haa straight kunoyamwa munyatso ndakanzwa munyatso uchindidaidza kuti ndiyamwewo. Ndichiyamwa zamu rekuleft rumwe ruwoko rwangu rwuchipuruzira zamu reku right ndichichinjanisa kuyamwa nekupuruzira. Guys zvese izvi zvaiitika zvinyoro nyoro.
Ndakaita kachinguva mbichana ndicjidaro ndichiita ndichimbodzoka kunokisa muromo shasha yakatanga kuzvonyongoka zvinyoro nyoro ini dzikisei ruwoko rwekwa right kuyenda kubeche. Ndakatanga kufambisa chigumwe ndichitevedza mutsetse we beche riri mupant ahh sha yakutokoira wena. Ndiye pant iye bvisei Ichikandwa kwakadaro uko. Kubata beche wanike atotota kare apa akatsinzinyira kuratidza kuteerera every touch yangu. Muromo wangu pamuromo wake ruwoko pazamu rumwe ruwoko pabeche. Ndikatanga kudhonza matinji one by one nekupuruzira klit. Ahh mukadzi anobva anakirwa guys. Ndakadzika futi nehuro ndichiplanter tumakiss kusvika pazamu ndikadzika mepadumbu paguvhu pazasi peguvhu kusvika pabeche. Ndakatanga nokuzasi kwaro kunanzva ndichikwidza kuklit. Ndikatora dinji one ndikarisvetera mukamwa kunge munhu arikusveta spaghethi. Ndikaita the same kune rimwe ndikazomasveta ese pamwechete. Ndikatanga kunanzva pakati pematitinji ndichikwidza kumuso very slowly apa moms iya ichingoshinyira ichikoirawo slowly.
Ndakavhara beche rese nemuromo wangu ndikasveta so ndikatanga futi kunanzva mukati mebeche ndichikwidza kuklit. Ndikatanga kukarova kaklit netip yerurimi zvirifast. Ko moms iyi ndakanga ndaipromisa mafire works kuti ndoda kukubatai panonaka chaipo moms. Ndaida kuipa pleassure yes zvandaifunga kuti haisati yambozviitwa . Ndaiita senge ndirikuda kuti mari izobuda.Ndakazodzika nerurimi kupinda mubeche chaimo ndobva ndatanga kuisvira nerurimi ndichirwupinza ndichibuditsa zvirifast. Moms ndokundibata musoro neruwoko rwayo ndokuwu director paside nechekuleft kwebeche rayo so ini nechemumoyo ndokuti ndipo pahasha apa ndakarova rova ipapo nerurimi ndichinanzva apandandakuita fast, moms ichindipuruzira kugotsi kwangu ichichmerera nekukoirawo fast manje. Yandibata musoro nemawoko 2 kwakundonyera paye ndiye gwi kwetsu kamhere koi koi zvikanzi im kuming wanike yawomesa muviri wese ndiye gwi futi kamhere kwetsu koi koi womesei muviri futi ndiye gwi gwi koi koi gwi gwi koi koi apa irikutotunda kutundira mumuromo mangu chaimo yakandidzvinyirira pabeche payo kuti ndisabve ahh. Ichichema nekunakirwa yanga yangova ah ah oh oh ih ih. Zvikanzi ah zvakawoma .
Ini ndikati mapedzaka ndiye nemuromo iwowo wakazara cum kiss kwavari eheka todya teseka ndingadye ndega hanti zvabuda kwaari. Takakisana ichifemera pamuso kunge munhu arikubva kunomhanya 100 m. Tichikisana zvinyoro nyoro ndikati its now my turn. Ndakanga ndiri pamusoro pemoms iya ndikabva ndakupinza sajeni zvinyoro nyoro ndakatarisa moms iya mumaziso chaimo. Ndapinza mbichana yakuda kusvika pakati ndobva ndakubuditsa zvinyoro nyoro kusiya musoro chete ndobva ndakuipinza futi ko haingonzi bvo yese ka one kunyangwe kwakatota. Ndakapinza saizvozvi moms iya yatsinzinya manje yakavhurira kamuromo mbichana ini ndikaikisa kusvika sajeni vapinda vese mukati ndikanzwa momz iya kuti ahhh.
Ndakamira ndakadaro irimo mukati pasina arikukoira ndichimbofeeler kawarmnth karimo mukati. Semurume unofanira kuratidza kuti you are in control ndakabva ndatanga kusvira mbichanana mbichana iyo moms ichikoirawo nepace yangu uku ndichikisa muromo ndombokisa muhuro ndombosveerera rimwe zamu rimwe ndakabata nerimwe ruwoko. Ko kukwirana kwevanhu vakuru hatisi kumhanyisa kana kumhanyiswa. Neniwo ndakanga ndagarisa ndakanzwa zvakuda kuwuya ndikamira kusvira ndikatanga kuibuditsa mbichana mbichacha wanike moms iya haichagona iripasi kudaro ndobva yadzikira mbichana ndobva mboro yangu yakupinda ichiita kunge irikutevezda mutsetse webeche ichibva nechekumusoro kune kabeans.
Zvikanzi nemoms iya ehe ehe ipapo yanga zvino yakuwedzera pace zvikanzi ahh ahh.
Ini nda ndirikuda kuyedza kudheleya kupedza ah kwani moms iya yandibata muchiwuno zvikanzi mirawakadaro paya pandanga ndirikuibuditsa ini ndokumirawo paya ndakazvisapota nemagokora nemabvi. Saka panga paine kagape pakati pedu asi sajeni varimo mubase. Moms ngavatange kukoira ini ndakadaro ko hanti ndanzi mira vachiti vakati left left letf voti right right right voti centre so very fast vachichemerera. Ndikati zvibaye wega ndakazonzwa vakuito kukoira kwacho kwekuita kugwina gwina vakungorova side one chete riya rekuleft kuye vanike mhere yawedzera ndakupedza ndakupedza kani maiwe maiwe kani. Hongu ini ndainakirwa but pfungwa dzakambofunga kuti ahhh machemerero arikuita amai ava ko vamwe vanhu vari mumanext rooms hawasi kuzvinzwa here?
Ko mukadzi wekureception namahobho anga akagaramo havasi kuzvinzwa here? Ko ivo amai ava kuchemerera uku ndekwechokwadi here kana kuti kungoda kundifadza. Ndakatarisa kumeso wanike zvino vachifinyama uku vakatsinzinya varikuratidza kuti varikune rimwe denga denga redu tiri vaviri muparadise chaimo. Ndipo pandakaziva kuti maya ichokwadi variko vakadzi vanochemerera zvechokwadi.
Ndakazonzwawo kuti ndakuda kupedza manje ndobva moms vatanga yavo iya yekugwina gwina vachirova paside paye pekuleft ndobva ndanzwa mazinzwara avo emumawoko kundibaya rumwe ruwoko kumagaro rumwe pakati pemusana chaipo, ranguwo shavi rikati rabata amai ndakakoira fast apa zvakasimba pachishasha kuda kuvaratidza kuti ndirimudiki hangu pamakore asi pakusvira ndapamberi. Ndikanzwa gotsi rangu kuti papata ndikanzwa kunge ndakadhakwa nembanje here kuti ibrandy here kuti idoro here hameno asi ini handina kana kumbobata chinodhaka svondo rese .
Ndakanzwa pfungwa kumboita kadzungu mbichabana so kunge dzambodzima here kkkk kunge takusvirana neslow motion ndobva ndayiti yese ndo moms iya uku irikungo ridza mhere mayiwe mayiwe kani ahh wanike ini wacho handichagona ko pfungwa dzanga dzaita shutdown ndiye hohlooo hohlooo hohlooo hohlooo maiyewe zvangu. Ndinosimbosvira hangu asi musi uyu ndakanakirwa zvandanga ndisati ndamboita. Takapedzerana ndobva ndanyatsotswa kuti rukutu kuneta tese tichifemera pamusoro kunge tanga tichitandanisana. Ndakangoti nechemumoyo moms ndaipedzera. Takambozorora mbichana takatangazve imwe stayera. Watch out for part 2 coz muroom umu takazobuda na 10am ndinechokwadi chekuti takasvirana about 5 rounds each round ari magetsi ega ega. Nekuti hatina kumbobvira takotsira kkkk taingoita tuma short breaks.
Kusejuswa kwandakaitwa na Aunty!
Next story Kusejuswa kwandakaitwa nekababie ka muIndian, ndobva ndakakwesha!
Previous story Ndakamusvirira skirt ye Blue.